နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲ LIVE ကြည့်နိုင်သော LINK... | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် ဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက် ကြည့်နိုင်တဲ့ Link လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!အင်တာနက် ကွန်နရှင်ရှိပြီး ဘေားလုံးပွဲ ကြည့်ရန်အခက်ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ...! နောက်ပြီး Mail ထဲကနေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း တောင်းထားလို့ပါ...! ကျွန်တော် အမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ ဆိုဒ်လေးဖြစ်သောကြောင့် ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်....!တကယ့်ပွဲကောင်းတွေ ရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်လို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ...! အင်တာနက် ကွန်နရှင် ကောင်းမှအဆင်ပြေမှာပါ...! ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေရင် Cbox မှာအော်သွားနိုင်ပါတယ်...!
Link 1 http://www.lshunter.tv/
Link2http://atdhenet.tv/
ကြိုက်တဲ့ Link တွေမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်...!အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...!
2 Response to နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲ LIVE ကြည့်နိုင်သော LINK...